Mombamomba ny orinasa - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Sary & horonan-tsary
tilikambo ambony tafo
tilikambo vy Tube
firafitra misolo herinaratra
fanoloran-tena sy tetikasa
Rafitra fitantanana kalitao
Fahasalamana, fiarovana ary tontolo iainana
SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2008.
XY Tower dia iray amin'ireo mpanamboatra tilikambo mpampita seranana lehibe indrindra any andrefan'i Sina. Ny orinasa dia manome rafitra vy maro samihafa, manokana amin'ny 500kV sy ambanin'ny tilikambo herinaratra, firafitry ny substation, tilikambon'ny fifandraisana, firafitry ny lalamby elektrika, sns.
Ny XY Tower dia mandrakotra velaran-tany 33000 metatra toradroa ary manana tsipika famokarana mandeha ho azy 10 miaraka amin'ny fahaiza-manao famokarana isan-taona dia 30.000 taonina. Ny fitantanana ny XY Tower dia manana traikefa lehibe amin'ny indostrian'ny herinaratra. Ny vola miditra amin'ny orinasa dia mihoatra ny 20 tapitrisa dolara, raha ny vokatr'ilay orinasa kosa ampiharin'i Shina.
XY Tower no mpamatsy mahay ny National Grid, South China Power Grid ary orinasa elektrika malaza maro.
XY Tower dia manome serivisy ho an'ny mpanjifa an-jatony miampita ny firenena. Ankehitriny XY Tower dia mampandroso haingana ny tsena any ivelany. XY Tower dia mikendry ny hanome ny vokatra tsara sy serivisy ho an'ny mpanjifa manerantany. Ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny XY Tower dia efa nanarona an'i Amerika atsimo, afrikanina, atsimo atsimo sns.
XY Tower dia manolo-tena hanome tolotra matihanina ho an'ny mpanjifanay rehetra. Manantena ny fiaraha-miasa aminao izahay.
Manomboka manangana ny tranoben'ny orinasa sy ny birao vaovao, aorian'izay, hihoatra ny 30.000 taonina isan-taona ny fahaizan'ny vokatra farany
Niorina i New Hop dip galvanized zavamaniry
Mihoatra ny 12000 m2 ny velaran-tanin'i Hop milentika zavamaniry
Nahazo orinasa miavaka eto an-tanàna.
Ny vola miditra isan-taona voalohany dia mihoatra ny 100000.000 RMB
Ny kapitaly voasoratra anarana dia mahatratra 50.000.000RMB, Nahazo ny fifanarahana voalohany avy amin'ny tsena ivelany (Sudan).
Ny vokatra isan-taona dia nahatratra tilikambo 10.000 taonina
Miorina amin'ny famokarana vaovao Ny faritry ny fototra miorina dia mihoatra ny 30.000 m2 ary lehibe kokoa noho ny teo aloha
Sichuan XiangYue tower Co., Ltd. dia hita fa mifantoka amin'ny indostrian'ny tilikambo vy, atrikasa namboarina ary nanomboka namokatra tilikambo herinaratra
Trading Company dia nahazo fifanarahana voalohany tamin'ny tilikambo fampitana
Orinasa mpivarotra kojakoja elektrika Sichuan XiangYue no hita indrindra indrindra fa ny mpandraharaha ara-barotra dia ny mpanova varotra, tariby ary tady, fitaovana elektrika sns
Mpanjifa ao an-trano
Tsena any ivelany
Head Factory: No. 528, West section, Liutai Avenue, Chengdu, Sina HDG Factory ：366, Tongxin Avenue, Chengdu, Sina